Engxenyeni yokuqala yonyaka, iChina ikhiqize amabhethri e-lithium-ion ayi-7.15 namabhayisikili kagesi ayizigidi eziyi-11.701
Kusukela ngoJanuwari kuya kuJuni 2020, phakathi kwemikhiqizo emikhulu yezimboni zokukhiqiza amabhethri eChina, ukukhishwa kwamabhethri e-lithium-ion kwaba yi-7.15 billion, ngokunyuka konyaka nonyaka ngama-1.3%; ukukhishwa kwamabhayisikili kagesi kwakuyizigidi eziyi-11.701, kukhuphuke unyaka nonyaka ngo-10.3%. Ngokusho kwe ...
Ukunyuka kwentengo yeCobalt kudlule okulindelwe noma kuzobuyela ezingeni elinengqondo
Kwikota yesibili ka-2020, inani eliphelele lokungenisa izinto zokusetshenziswa ze-cobalt kwakungamathani ayi-16800, ukwehla konyaka ngonyaka kwe-19%. Phakathi kwazo, inani eliphelele lokungeniswa kwensimbi ye-cobalt kwakungamathani ayi-0100 wamathani wensimbi, kanti ukwehla unyaka nonyaka kwehle ngama-92%; ukungeniswa okuphelele kwemikhiqizo emaphakathi ye-coba ...
Ngonyaka odlule, kwathunyelwa i-11.0 GWH yamabhethri e-lithium omhlaba wonke yamathuluzi kagesi, ama-80% awo asetshenziswa ezimbonini zaseChina
Ibhethri leLithium lithole ukubuyiselwa kwebhethri le-nickel cadmium bese kuba yi-nickel hydrogen battery. Ngokombono wesikali semakethe, isilinganiso semakethe yomhlaba wonke se-lithium battery yamathuluzi kagesi sizofinyelela ku-9.310 billion yuan ngo-2019, kanye nesikali semakethe ye-lithium battery yamandla ...
Ngo-Agasti 22, 2018, ngaphansi kwenhlangano yezikhungo zokuphathwa kwabasebenzi, abanye abasebenzi be-TRUE POWER bashayela ihora elilodwa baya e-Jinsha bay hotel development base, baqala ukuqeqeshwa kosuku olulodwa lokuthuthukisa. Kujabule wonke umuntu kuhlekwe nomoya uphezulu. Inhloso yalomdala ...
Ngo-Okthoba 12, 2019, i-Hong Kong Electronic Exhibition eyabanjelwa izinsiza zomhlaba yabanjelwa e-Asia International Expo eHong Kong. AMANDLA EQINISO amenywa ukuthi abambe iqhaza embukisweni, idokodo elingu-No.: 5c-b33, sikhombise amabhethri e-lithium-ion, amabhethri e-polymer, amabhethri e-nickel hydrogen an ...
Ukuhlaziywa kwebhethri le-lithium kanye nomkhakha omusha wemoto yamandla
Ngokwesimo sokuthuthuka okuthuthukayo kwezimoto ezintsha zamandla, izimoto zikagesi eziyizigidi eziyi-2.2 zathengiswa umhlaba wonke ngo-2019, ukwanda okungu-14.5% ngonyaka, okubalwa ngo-2.5% wokuthengiswa kwezimoto okuphelele. Okwamanje, ngokuthengiswa kwezimoto ezintsha zamandla, i-BYD ikleliswe endaweni yesibili nguTesla. Ngonyaka we-19 ...
18650 uNimh, Li Ibhethri, Iphakethe Lithium Battery Pack eyi-12 Volt, 12v Lithium Ion Ibhethri elishajekayo, 3.7 Ibhethri elishajekayo, I-Lithium Ion Polymer Ibhethri, Yonke Imikhiqizo